188,747 oo Xaaji oo laga celiyay magaalada Makkah | Gaaloos.com
Home » islam » 188,747 oo Xaaji oo laga celiyay magaalada Makkah
188,747 oo Xaaji oo laga celiyay magaalada Makkah
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa horey u sheegtay in tirada Xujeyda ee sanadkan hoos loo dhigay taas oo lagu sababeeyay balaaran lagu sameynaayo goobaha ama manaasikta Xajka.
Tirada la qorsheeyay in ay sanadkan Xajka gutaan darteed ayaa loo celiyay dadkaan in ay galaan magaalada barakeysan ee Makkatal mukarama kuwaas tiradoodu dhan tahay188,747, sida booliiska magaalada laga soo xigtay.
Maamuliyaasha Sacuudiga ayaa sheegay in aan loo dulqaadanaynin ciddii jabisa shacriga iyo kala dambeynta.
Madaxda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale sheegay in 84,965 oo gaari loo diiday in ay galaan magaalada kadib markii laga waayay sharciyadii looga baahnaa sida uu warbaahinta gudaha u sheegay Saciid Bin Salem Al Qarni.
Isagoo intaa ku daray in ciidanka amniga ay ku howlan yihiin sidii Xujeyda si nabad ah acmaashooda uga gudan lahaayeen isla markaana looga hor taggi lahaa waxyaabaha carqaladeyneya arimaha Xajka,waxaa uu xuey in magaalada barakeysan ee Makkatal mukarama laga sameeyay ilaa 22 howlgal oo lagu soo qab qabanayo dadka sida sharciga darada ah ku soo galay.
“Howlgalada waa ay sii socon doonaan ilaa la xaqiijiyo in qofkasta uu u hogaansamay sharciyada,” ayuu yiri Al Qarni.
Title: 188,747 oo Xaaji oo laga celiyay magaalada Makkah